Izindawo zokuhlala e-Cinnamon Kerinci
Ngihlala esigodini, enhliziyweni ye-kerinci seblat national park, e-Kerinci, e-Sumatra.Abantu bayibiza ngokuthi isigodi esiyimfihlo ngoba ababaningi abantu abazi ngendawo yethu emangalisayo. Iningi labantu emphakathini wethu lisebenza ngesinamoni nekhofi.
Sinamagumbi amabili anethezekile. Ikhishi nendawo yokugezela kufanele kwabelwane.
isikuta, ukuqashwa kwemoto kanye nokuvakasha e-Mt Kerinci, ichibi lezintaba ezingu-7, ichibi eliluhlaza okwesibhakabhaka, kungahlelwa kalula.
Ibhulakufesi lamahhala uma uthatha uhambo lwethu lwasehlathini. :)
Siyakwamukela endlini yethu yomndeni. Sinikeza amakamelo anethezekile angu-2:
Igumbi 1 : umbhede ophindwe kabili kanye nombhede ongayedwana ongahlalisa abantu abangu-3.
Igumbi 2 : Imibhede emibili engahlalisa abantu abangu-2 ubuningi.
Igumbi lokugezela elabelwe
Uzothola ukuthi kunjani ukuhlala endaweni enhle. Azikho izivakashi eziningi ezifika kuleli dolobhana ngakho uzohlala phakathi kwabantu bendawo endaweni engakathintwa. Kukhona isiko eliqinile futhi wamukelekile ukuthi uhlanganyele emikhosini futhi uhlangane nabo bonke abantu bendawo ukuze ube yingxenye yayo.
Siwosa ikhofi lethu futhi wamukelekile ukujoyina ukuze ubone inqubo, kanye nenqubo yesinamoni.
Futhi ngokuqinisekile uzoyijabulela indawo yethu.
Sizungezwe amagquma, insimu yerayisi kanye nokubukwa kwehlathi, imizuzu emi-5 ukusuka emakethe yendabuko, imizuzu engama-30 ukusuka edolobheni laseSungai penuh.
Mina kanye nabasebenzi bethu bangahlala bekusiza ngenjabulo enkundleni futhi bahlele uhambo lwakho.